ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ မောင့်ကော်မရှင်ကြီးနဲ့ ...
နောက်တခါ လာပြန်ပြီဟေ့။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဆိုပါကလား။ အားရစရာကြီးဗျ။ ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်မှာ အနှီလို စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဆိုသဟာကြီးတွေဟာ မကြာမကြာ ပေါ်လို့၊ ပေါ်လို့ လာတတ်သဗျ။
ဘာ့ကြောင့်များ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာကြီးတွေ လုပ်လုပ်နေရသတုန်းလို့ မေးရင် ခင်ဗျားတို့ လူထုက တောင်းဆိုတာကိုးလို့ ပြောမယ်ထင်ရဲ့။
နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒါမျိုးလုပ်ကြတာပဲလေလို့လည်း ပြောမယ်ထင်ပါရဲ့။ ဟုတ်တာပ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်း စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တော့ ဘဏ်တွေ၊ အိမ်ယာမြေလုပ်ငန်းတွေကို စီးပွားရေးကပ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာ ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းကြရဲ့။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်း လွှတ်တော်အမတ် ဆိုတဲ့သူတွေက ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အလွဲသုံးစားလုပ်တော့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုပြီး လုပ်လားလုပ်ကြ၊ ဒီတော့ ဒို့မြန်မာကလည်း အားကျမခံပေါ့လေ။
စိမ့်တာလည်း မပြောနဲ့လေ။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ဖွဲ့တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဆိုတာများဟာ ဟုတ်တာမှန်တာများ ဘယ်တုန်းက ပြောဖူးလို့တုန်း။
“သူတို့ဟာ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ စုံစမ်းစေချင်လို့မှ မဟုတ်တာကပဲ။ မကျေနပ်တဲ့သူတွေကို အချိန်ဆွဲလို့ရအောင် နှစ်သိမ့်လို့ရအောင် လုပ်တဲ့ နည်းဗျူဟာကြီးပါကလား။ အမြဲတမ်း၊ အမြဲတမ်း သူတို့ဖွဲ့တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အဆုံးမတော့ ရည်ရွယ်ချက်က ဂလိုကိုးဗျ။”
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဖုန်းမော်အရေးအခင်းဖြစ်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာကြီး ဖွဲ့ခဲ့သေးပါသော်ကော။ အဲဒီစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာကြီးက ဘာပြောတုန်း။ ကျောင်းသားတွေကို မထိအောင် မြေကြီးပေါ်ရှပ်ပစ်တာဆိုပဲ။ မှန်လိုက်သမျှကလည်း စုစုပေါင်း ငါးယောက်လား ခြောက်ယောက်လားဟာ နောက်ကျောတို့ ဝမ်းပိုက်တို့မှာချည်းဗျ။ အဲဒီစုံစမ်းရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကြီး ဖတ်ပြီးမှ အော် … သေနတ်မှန်ခံကြရတဲ့သူတွေဟာဖြင့် မြေကြီးပေါ် ဝပ်ရှောင်တဲ့သူတွေပါလားလို့ အတွေးအသစ်၊ အမြင်သစ်၊ သေနတ်ပစ်တိမ်းရှောင်နည်း သင်ခန်းစာသစ်တွေ ရလာခဲ့သကိုး။ ဒီလိုအတွေးအသစ်၊ အမြင်သစ်တွေကြောင့် နောက်နောင် အရေးအခင်းဖြစ်လေတိုင်းမှာ မြေကြီးပေါ် ရှပ်ပစ်မယ်အထင်နဲ့ ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်နေတတ်သူဟာ တခြားသူဟုတ်ပါရိုးလား။ ကျွန်ုပ်လှမောင်ဟန်ပင် ဖြစ်တော့သည်တကား။
တလောကလည်း ရခိုင်အရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုလား ဖွဲ့လိုက်ပါသေးရော။ ရခိုင်တပြည်လုံး မီးတွေသာ တဟုန်းဟုန်း တောက်သွားပါလေရော။ သူ့စုံစမ်းရေးက ပြီးကို မပြီးနိုင်ဘူး။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်များ မီးထဲပါသွားသလားမသိ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 1:58 AM
I don't think so for this fake commission.
We don't want u fake commission's leader.
Don't make your history not to be ugly.
စုံစမ်းရေးကော်မီရှင်ပထမဖွဲ့စာ်းတုံးက အချက်တွေထံက အထိကရုံးဖြိုခွဲပုံကိုဖေါ်ထုပ်ရေးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ၈၈အဖွဲ့ မပါဝင်လာခြင်းဟာ သံသယဖြစ်စရာအချက် ၂ ချက်ဖြစ်နေလို့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာ အကန့်အသတ်ဘောင်ထဲမှာရှိနေတာထင်ရှားပါတယ် အဖြေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးစောင့်ကြည့်နေစရာလိုသေးလို့လား
This is very good article which reflect what's happening.
I hope my comment is not true, but Daw Suu is in the trap. Burmese public is waiting how can she handle so called commision "shit bag".
I respect Hla Mg Han. You have good idea and true message for public. We have encaurage you OK. We like you.
I agree Hla Mg Han
You writings are so powerful
Please keep sharpening your pen
Let us know more and more
စစ်အစိုးရ လက်ကိုင်တုတ် စစ်တပ်နဲ့ ရဲ ကို ဖြိုခွဲဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် နဲ့ ပြည်တွင်းက မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေ စုပေါင်းပြီး "ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်" စင်ပြိုင်ထူထောင်ပြီး လိုတာကို တောင်းဆိုခြင်းကသာ ပြဿနာ အားလုံးရဲ့ အဖြေဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာကို အတိအလင်း ကြေညာပြီး စင်ပြိုင် "ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်" တည်ထောင်ပါ။ ပြည်တွင်းက ပြောင်းလဲလိုတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို စည်းရုံးပါ။ အာဏာရှင် ဖက်ဆစ်တွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ "ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်" အမြန်ထူထောင်ကြပါ။ "ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်က" သာလျှင် အာဏာရှင်တွေကို ဖြုတ်ချပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှန်တကယ် စွမ်းအားရှိလာအောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ စတင်ဖွဲ့စည်းမယ့် ညီညွတ်သော ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ကသာလျှင် ပြဿနာ အားလုံးရဲ့ အဖြေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
ထင်တဲ့အတိုင်းဘဲ လွန်းဆွေ ဆီမှာ တင်မှတော့ စောက်ပြစ်ပြော ဆောင်းပါးဘဲနေမှာလို့
စိန်ရွှေ အစိုးရက ဒီ စကား ကြားရင်တော့ အနာပေါ် ဒုတ်ကျ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဗမာပြည် အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေက တပ်မတော် ဖြိုခွဲရေးဘဲ။
အခုလက်ရှိ စစ်တပ် ဒီ အနေအတိုင်း ရှိနေသမျှ ဘာမှ တိုးတက်မှာ မဟုတ်ပါ။
မင်းအစိမှာမမြင်သေးဘူးလား။အပေါ်ကMG TOE ပြော
I don't want to be another state for 144 martial-law in My mother-land.
လွန်းဆွေ ဆီက ဆိုရင်စောက်ပြစ် ပြောဘို့ဘဲ
ခေါင်းစဉ်ကလဲ စောက်တလွဲ-မောင်တိုးဆိုတဲ့ကောင် နင်ပြောသလောက် လွယ်မလား ခွေးမသား။
I don't understand why u expressing rude coments.
zulu zenith said...
မျော်လင့်ချက်တွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ အထိုက်အလျောက် ရှိနေချိန်မှာ အစိုးရရဲ့ မင်းသားမျက်နှာဖုံးကြီးကွာကျ ဘီလူးမျက်နှာကြီးကို တွေ့လိုက်ရတော့..
ယုံကြည်မျှော်လင့်မိတဲ့ ငါတို့ကိုက တုံးတာပါ ဆိုပြီး နာကြည်းဒေါသ ဖြစ်နေကြတာပါ။
အဓိကအရေးကြီးဆုံးက သမ္မတဆီတင်မယ့် လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူကို တရားဝင်ချပြဖို့လိုတယ်။
ဒီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်သမျှဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ဒေသခံတွေအပေါ် တရားမျှတမှု၊ ဘာသာသာသနာအပေါ် အလေးအနက်မထားမှု တစ်ခုမှ မရှိခဲ့တာကြောင့် ပြဿနာကြီးထွားလာရတယ်။
အခုလည်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ကော်မတီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ထုတ်ပြန်ပေးသင့်တယ်။ သမ္မတဆီ တင်ပြတဲ့ စာကို ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက် လုံးဝ မပါဘဲ အရှိကိုအရှိအတိုင်း အစိုးရသတင်းစာတွေကနေ ပွင့်လင်းစွာ မြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြသင့်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကော်မရှင်ကမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီကော်မတီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အလံရှုးလုပ်ဆောင်ချက်၊ လူလည်ကျလွန်းတဲ့ လှည့်ကွက်တွေလို့ တစ်ထစ်ချ မှတ်ယူရမှာပါ။
တကယ်တော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟာ အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ယုံကြည်လေးစားခံရစေမှု တန်ဖိုးတွေပါ။
ct ရဲ့ ပြောသလို..လွဏ်းဆွေ ဟာ တခါတခါ အဖြစ်ဘဲရှာနေတာ..ကိုယ်မှ မလုပ်နိုင်တာ စောင့်ကြည့်ပါ့လားကွာ...ဒို့ အမေစုကို ယုံတယ်ကွာ..
ဝေဖန်ရေး ဆရာ အကြံပေး ဆရာကြီးတွေလဲမဟုတ်ဘူး
ဘယ်နှစ်ခုနှစ်တုန်း က ဘယ်နိင်ငံမှာ
ကျွန်တော့်လို အွန်လိုင်းသတင်း အစုံဖတ်ပြီး
သမိုင်းပေးတာဝန် မကျေပွန် သေးသူလည်းမဟုတ်ဘူး၊၊
လက်ပတောင်းတောင်ဒေသက ရွာသူရွာသား များသာဖြစ်တယ်၊၊
မုံရွာ ၊ မန္တလေးနဲ့ ပခုတ္ကူ ဒေသတ၀ိုက် က ရဟန်း သံဃာတော်များသာဖြစ်တယ်၊၊
သူတို့ ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး..
like UNION ARMY but COMING U TURN
todegyee maung said...
မင်းတို့ထင်သလိုလွယ်ပမလား NLD တွေ၊ မင်းတိုဟာမကြီးက သူမလုပ်နိုင်မှာဆိုးလို့
ဒီကိစ္စမှာ ဆန္ဒပြတာတွေတောင် မင်းတို့ကို